Maxay Tahay Ujeedada Safarka Axmed Madoobe Ee Kenya?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxay Tahay Ujeedada Safarka Axmed Madoobe Ee Kenya?!
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Madoobe
Maxay Tahay Ujeedada Safarka Axmed Madoobe ee Kenya
Sida la isla dhex marayo, safarka Axmed Madoobe uu ku tagay Kenya, waxaa ka shaqeeyay dawladda Imaaraatka oo adeegsanaysa madaxwaynaha Puntland Siciid Deni, Kenya, kooxaha mucaaradka, iyo qaar ka mid ah beesha caalamka.
Afartaan qolo waxay wadaagaan hal dan oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay sidan.
In Soomaliya aysan marna ka dhismin dawlad leh awood ciidan, dhaqaale , iyo mid siyaasadeed.
In maamul goboleedyadu yeeshaan awood la siman tan dawladda dhexe.
In laga shaqeeyo sidii taliska hadda xukunka haya loogu adkaan lahaa Doorashada 2021-ka.
In Khayraadka waddanka gacanta loo galiyo dawlado iyo shirkado shisheeye oo aan Somalia la xisaabtami karin, sida kuwa hadda ka hawl gala Puntland oo laga leeyahay Imaaraatka.
In dawladda hadda talada haysa waqtiga looga lumiyo mucaaradnimo, eedayn joogta ah, shirar iyo wada-hadallo joogto ah oo aan natiijo fiican ka soo bixin, iyo curyaamin hawlaha golaha shacabka iyo tan wasaaradaha dawladda.
Wadahadllo Igu Sawir Ah Waa Waqti Lumis
Haddaba safarka Axmed Madoobe ee Kenya wuxuu ka mid yahay shirarka macna darrada ah oo loogu talo galay in dawladda waqtiga looga lumiyo oo lagu mashquuliyo inta laga gaarayo doorashada 2021-ka, iyadoo lagu mar-marsiinyo laga dhigayo in loo baahan yahay in la qabto wada-hadallo lagu heshiisiinayo Jubaland iyo dawladda dhexe, iyo sidoo kale Puntland iyo dawladda, laakiin ugu dambaynta lagu kala tago meesha iyadoo wax macna leh aysan ka soo bixin.
Maxaa Iska Baddalay Mowqifkii iyo Sheegashadii Axmed Madoobe?
Faroole baa waxaa laga sheegay in isagoo ka hadlaya Axmed Madoobe uu yiri: “Fuuto Waxa Ku Jira Aan La Garanayn Baan Riixnay.” Axmed Madoobe wuxuu Kenya u yimid cid dhab u garanaysa ma jirto, laakinn waxa la leeyahay Deni ayaa hormuud ka ah mu’aamaraddaan isaguna wuxuu wakiil u yahay imaaraatka. Laakiin waxa iswaydiin leh maxaa Deni u sheegi karaa Axmed Madoobe oo uu ka tanasuli karaa? Aniga waxay ila tahay inaysan jirin wax Axmed Madoobe oggol yahay inuu ka tanasulo hadda oo uu sheeganayo madaxwaynenimo laakiinse uu diiddanaa ka hor intii aan la qaban doorashdii Jubaland ee uu sida aan sharci darrada ah u maroorsaday?
Waxaan ognahay in Axmed Modoobe yahay nin madax adag oo aan ka fuqin meeshuu ku dhego, sida keliya ee lagula heshiin karana waxa weeye in loo yeelo sida isagu rabo. Sidoo kale, Axmed Madoobe ma aha nin fahmi kara ama la jaan-qaadi kara marxaladda hadba lagu jiro, sida tan ah in gobolka Gedo farihiisa baxday, in dhaqaalihii Jubaland uu bur-buray, in shacabka Jubaland aysan taageero wayn u hayn, in beesha caalamku dalbanayso in la qabto doorasho hor leh oo loo wada dhan yahay, si cadaalad ahna u dhacda.
Xalku Ma Aha In Dhiig La Daadiyo Ama Xoog Lagu Kala Adkaado?
Sidoo kale, Axmed Madoobe waa jabhad aaminsan in khilaaf kasta dhiig loo daadiyo oo xoog lagu kala baxo. Waa isagii yiri: “Kismaayo waxaan soo galay anoo mayd iyo dhaawac sita”, sida keliya oo uu aaminsan yahay in Kismaayo looga qaadi karana waa isagoo xoog lagu jabiyo oo u ka baxo isagoo mayd iyo dhaawac wata.
Aan Fahamno Dhagarta Cadowga, Kana Shaqayno Danta Soomaaliya
Haddii Axmed Modoobe uu u danaynayo rabitaanka dadka reer Jubaland, iyo dhisidda dawlad Soomaaliyeed oo dadka iyo dalka horumar, nabad, iyo midnimo u horseedda, danta iyo rabitaanka guud buu ka hor marin lahaa tan jeebkiisa iyo tan kursigiisa.
Haddaba, safarka Axmed Madoobe wax soo abaabulay dawlado iyo kooxo dano gaar ah ka leh Soomaaliya isla markaana raba in Soomaaliya ku sii jirto dhibkii iyo dawlad la’aantii ay ku jirtay 30-kii sano ee la soo dhaafay.
Sidaa awgeed, Soomaalidu waa inay ogaato, had iyo jeerna ku baraagusanaato in danta keliya ee dawladaha shisheeya ka leeyihiin Soomaaliya ay tahay inay waligeed ku sii jirto bur-burka iyo kala qaybsanaantaas si cadawgaasi u qaataan khayraadka shidaalka, macdanta, Kalluunka, dekadaha, iyo garoomada Soomaaliya oo gacantooda dib uga bixin, Soomaaliduna ku jirto gaajo, baryo, iyo qaxootinimo, dawlad la’aan.
Dhib Kasta Faraj Ba Ka Dambeeya
Ugu dambayn, wixii guul-darriyo jab ku dhacay Soomaali 30-kii sano ee la soo dhaafay, Insha Allahu maruun bay sidii aar libaax Soomaaliya oodda soo jabine, ha is jireen kuwa Soomaalida sheeganaya laakiin cadawga u adeegaya si ay u ilaashadaan kursi, ama u helaan lacag xaaraan ah oo aysan shaqaysan, ama helaan jago aysan mudnaan, aqoon, iyo khibrad toona u lahayn.